महिला साफ च्याम्पियनसिप नेपालमा गर्न प्रस्ताव - MeroKhelkud
महिला साफ च्याम्पियनसिप नेपालमा गर्न प्रस्ताव
२०७८ पुष २४ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर110LeaveaComment on महिला साफ च्याम्पियनसिप नेपालमा गर्न प्रस्ताव
काठमाडौं । साफ महिला च्याम्पियनसिप नेपालमा आयोजना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ (साफ) को शुक्रबार बसेको कंग्रेसले साफ महिला आगामी अगष्ट १२ देखि २४ सम्म नेपालमा आयोजना गर्न प्रस्ताव गरिएको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ ।
नेपालले यसअघि सन् २०१९ मा विराटनगरमा पाँचौं संस्करण आयोजना गरेको थियो । साफका अध्यक्ष काजी मोहम्मद सलाउद्दिनको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले २०२२ मा आयोजना हुने विभिन्न प्रतियोगिताको मिति परिमार्जन समेत गरेको छ ।
परिमार्जन गरिएको तालिका अनुसार साफ यू-१८ महिला च्याम्पियनसिप मार्च १५ देखि २६ सम्म भारतमा हुनेछ । यस्तै साफ यू-२० च्याम्पियनसिप पनि भारतमै जुलाई २५ देखि अगस्ट ५ सम्म हुनेछ । साफ यू-१७ च्याम्पियनसिप श्रीलंकामा सेप्टेम्बर ५ देखि १६ सम हुनेछ । साफ यू-१५ महिला च्याम्पियनसिपको मिति भने तय हुन बाँकी रहेको छ ।
कोरियाली फरवार्ड सनलाई सातौं पटक ‘बेस्ट फुटबलर इन एसिया अवार्ड’
के रियलका पुर्व प्रशिक्षक जिदान पिएसजीको प्रशिक्षक बन्न लागेका हुन् ?
टोकियो ओलम्पिक : नेपालकी सोनियाले रसियाकी इरिनासँग भिड्ने, कस्ले जित्ला त खेल ?
२०७८ श्रावण ७ गते २०७८ श्रावण ७ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर
विश्वकप फुटबल दुई दुई वर्षमा गर्न फिफाले अध्ययन गर्ने
२०७८ जेष्ठ ८ गते २०७८ जेष्ठ ८ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर
१२ वर्षीय हेन्ड जाजा टोकियो ओलम्पिककी सबैभन्दा कान्छी खेलाडी
२०७८ श्रावण ८ गते २०७८ श्रावण ८ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर
बिल्वाओलाई हराउँदै रियल म्याड्रिडले जित्यो सुपर कपकाे उपाधि